Is२०० ब्लक लुइसियाना • डचटाउनएसटीएल • डचटाउन, सेन्ट लुइस
अवरुद्ध आयोजन - मिशाक्ष पोडकास्टबाट टाशा र स्ट्यासीसँग कुराकानी
प्रकाशित फेब्रुअरी 24th, 2021
त्यसैले मलाई MizE शिक्षा केटीहरु संग ब्लक आयोजन को प्रक्रिया को बारे मा कुरा गर्न आमन्त्रित गरियो, दुबै दुबै हाम्रो ब्लक को आयोजन मा अभिन्न रहेछन्। यो कुराकानीले वास्तवमा कसरी गर्ने भन्ने पागल र बोल्टहरूको बारेमा कुरा गर्छ, साथै केही सामान्य दिशा र स्रोतहरूको TON प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं यो पढ्दै वा सुन्नुहुन्छ र तपाईंको ब्लक कसरी व्यवस्थित गर्ने हाम्रो फेला पार्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया मलाई ईमेल गर्न सम्पर्क पृष्ठ प्रयोग गर्नुहोस् र हामी तपाईंको आवश्यकताहरू / चुनौतीहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्न समय सेटअप गर्नेछौं। प्रत्येक ब्लक यसको आफ्नै अनौंठो अवरोधहरू हुनेछ, तर तपाईं आफ्नो प्रक्रिया को एक हिस्साको रूपमा हाम्रो पाठ-सिकेको लाभ उठाउनु छ।
यहाँ पोडकास्ट जाँच गर्नुहोस्!
कसरी ब्लक आयोजन शुरू हुन्छ
भर्जिनियामा छिमेकीहरूको बढ्दो समूहले उनीहरूको ब्लकमा सडकमा र फोहोर, गल्ली, अपराध र नजिकका अन्य उपद्रव क्रियाकलापहरूमा मुद्दाहरूको बारेमा कुरा गर्न थाले। एउटा छिमेकी सफाइको लागि अनौपचारिक योजनाबाट के शुरू भयो भने छिमेकीहरूको लागि डचटाउनको कुनामा बलियो बनाउन र सुधार गर्न एक संगठित र स्थायी गठबन्धन सिर्जना गर्ने इच्छामा विकसित भयो।
तिनीहरू डचटाउनमा आयोजित पहिलो ब्लकहरू होइनन्। यो प्राय: जैविक रूपमा सुरू हुन्छ। एक अर्काको पोर्चमा रहेका केही छिमेकीहरूले अनुभवहरू छलफल गरिरहेका छन् र केही छाडा विचारहरू गाउँ सफा गर्ने केही अरू छिमेकीहरूमा परिणत हुनेछन्। त्यसोभए उनीहरूले एउटा बल्क पार्टीको योजना गर्नेछ जुन सबैलाई सडकमा भेट्ने र भेट्ने र मिसाउने काम गर्दछ, प्राय: पहिलो चोटि तिनीहरूका छिमेकीहरूका लागि। तिनीहरूले फोन नम्बर र ईमेल साटासाट गर्छन्। तिनीहरू बढि कुरा गर्छन् र एक अर्कालाई खोज्छन्। गति बढ्छ।
लुइसियानाको 4200२०० ब्लक, किंग्स्ल्याण्ड कोर्टको 3500 XNUMX०० ब्लक, र निश्चित रूपमा अन्य थोरै शहरमा ग्रेटर डचटाउनमा यसै कुरा शुरू भयो। केहि छिमेकीहरूले अनौपचारिक अन्तर्क्रियाको रूपमा शुरू भएपछि त्यहाँका बासिन्दाहरू कडा सञ्जाल बने, जसले एक अर्कालाई कुराकानी गर्ने, योजना बनाउने र सुरक्षा गर्ने गर्दछन्।
ब्लक आयोजकको भविष्य योजना गर्दै
DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन र डचटाउन STL.org यी nascent ब्लॉक संगठनहरू मजबूत बनाउन को लागी, संचार को सुविधा, र अन्य ब्लक को लागी पछाडिको टेम्प्लेट निर्माण गर्नुहोस्। यसमा संलग्न छिमेकीहरूको अनुभवको साथ, हामी एक सीधा मोडेल सिर्जना गर्ने आशा गर्छौं जसले चासो ब्लकहरूलाई छिटो व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ।
के तपाईंको ब्लकमा पहिले नै संस्था छ कि बिल फिट? के तपाई यो गर्न चाहानुहुन्छ? हाम्रो साथ सम्पर्कमा जानुहोस् र डचटाउनमा ब्लक आयोजन को भविष्य को लागी योजना गर्न सहयोग।
तपाईं आज हामीलाई स्टारज सैलुनमा भेट्न सक्नुहुन्छ स्फूर्ति तथा छलफलको लागि कसरी तपाईंको ब्लक समावेशी हुन सक्छ। सुनिश्चित हुनुहोस् कि सुरक्षित रहनुहोस् र तपाईंको मास्कलाई तपाईंको विचारहरू र प्रश्नहरूको साथ ल्याउनुहोस्!
तल दायर गरिएको ब्लक. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. ब्लक, अपराध र सुरक्षा, DT2, डचटाउन, डचटाउन सीआईडी, र स्वयम्सेवक अवसरहरू. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अगस्ट 7th, 2020 .